Nhọrọ nkpuchi: Ọhụrụ na Spain na UNWTO?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nhọrọ nkpuchi: Ọhụrụ na Spain na UNWTO?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Naanị onye ozi Egypt nke njem nlegharị anya gara Madrid ịga nzukọ 113th Executive Council wee tụọ maka Zurab Pololikashvili na Secretary General Election. Ndị ọzọ bịaranụ bụ ndị ọrụ ndị nnọchi anya obodo. Yiri mkpuchi dị ka iwu Spanish nyere n'iwu adịghị mkpa, ọbụnadị maka onye otu dị elu si Spain. Mgbapu diplọma na-edobe usoro ọhụụ na onye nwere ike gbasaa maka mmemme UNWTO a.
Nri abalị nke esemokwu nke UNWTO Secretary General kpọrọ ndị nnọchi anya ka ha mechie nzukọ 113th Executive Council Member na Madrid na Tuesday nwere ikike ịghọ ihe omume mgbasa ozi COVID-19.
Onye odeakwụkwọ ukwu nke World Tourism Organisation (UNWTO), Zurab Pololikashvili, agbasoghị ụkpụrụ iwu ahụike na oriri abalị a mere na Tuesday a na Westin Palace Hotel na Madrid, dị ka La Marea si kwuo .
Ndi Madrid City Council kwadoro ihe omume a dika onye nkwado nke UNWTO. Imirikiti ndị ọbịa ahụ enweghị mkpuchi tupu ha amalite nri abalị.
Pololikashvili makụrụ Mịnịsta Ofesi nke Georgia David Zalkaliani, onye kwadoro nri abalị na-ese okwu n'abalị ahụ tupu ntuli aka dị ka akụkụ nke mmemme gọọmentị na-emebi iwu ụkpụrụ omume UN.
Medialọ mgbasa ozi ahụ e kwuru n'elu nwere ohere ịnweta vidiyo nke ha na-emesi obi ike na a na-ahụ Pololikashvili na mmebi nke usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-enweghị iji ihe nkpuchi mgbe ị na-enyefe onye ọchụnta ego Turkey bụ Yavuz Selim Yükselir akara nke na-amata ya dị ka onye nnọchi anya Ọpụrụiche ọhụrụ nke the Sector of Tourism and Hospitality na Turkey.
Pololikashvili abụghị naanị onye mebiri usoro nchebe iji gbochie mgbasa nke nje ahụ.
Onye ọchụnta ego Turkish bụ Yavuz Selim Yükselir gagharịrị gburugburu ụlọ ebe a na-eme ihe omume ahụ na-enweghị ihe nkpuchi iji gosi ndị ahụ sonyere na ya akara mbata ọ natara n'aka Zurab, na-amata ya.
Ndi mmadu 162 sonyere na nri anyasi. N'ime ha, Mịnịsta na-ahụ maka Industrylọ Ọrụ, Azụmaahịa, na njem nleta na Spain, Reyes Maroto.
N'oge ihe omume ahụ ụfọdụ ndị isi na-eme njem nleta nwere ihe nkpuchi, ndị ọzọ leghaara iwu Spanish anya.
Ememe oriri abalị ahụ mere mgbe a họpụtaghachi Pololikashvili maka okwu nke abụọ n'isi nke ụlọ ọrụ a pụrụ iche nke United Nations, nke dị na Madrid, maka oge 2022-2025.
Prime Minista Spain bụ Sanchez kwupụtara okwu na mbụ nke ọ nabatara ndị bịara wee nyochaa nkwado ndị gọọmentị Spain nyere ngalaba ndị njem na atụmatụ ọ gbara iji chebe ndị ọrụ ngalaba ahụ.
N'otu ụbọchị ahụ, ekwuputara 5570 ọhụrụ coronavirus na Madrid.